Iindaba -Iasidi yeOrganic yolimo lwaselwandle
Iiacidi zeOrganic zasemanzini
Ii-organic acid zibhekisa kwezinye izinto eziphilayo ezineasidi. Eyona acid ixhaphakileyo yi-carboxylic acid, eneasidi yayo evela kwiqela le-carboxyl. I-methyl calcium, i-acetic acid, njl njl.
Indima yee-asidi ze-organic kwiimveliso zasemanzini
1. Nciphisa ityhefu yesinyithi esinzima, uguqule i-ammonia yemolekyuli emanzini e-aquaculture, kunye nokunciphisa ityhefu ye-ammonia enetyhefu.
2. I-acid ye-Organic inomsebenzi wokususa ungcoliseko lweoyile. Kukho ifilimu yeoyile echibini, ngenxa yoko iasidi ephilayo inokusetyenziswa.
3. Ii-acid ze-Organic zinokulawula i-pH yamanzi kunye nokulinganisa ukusebenza kwamanzi.
4. Inganciphisa i-viscosity yamanzi, ibole i-organic matter ngokuhamba komhlaba kunye nobunzima, kunye nokuphucula uxinzelelo lwamanzi.
5. Ii-acid ze-Organic zinenani elikhulu lezixhobo ezisebenza ngokudibeneyo, ezinokuthi zenze intsimbi enzima, zitshabalalise ngokukhawuleza, zinciphise uxinzelelo lomhlaba emanzini, zinyibilikise ioksijini emoyeni emanzini ngokukhawuleza, ziphucule ioksijini eyonyusa umthamo emanzini, kunye nolawulo lwentloko edadayo.
★ Iimpazamo ekusebenziseni iiacidi ephilayo
1. Xa i-nitrite echibini ingaphezulu komgangatho, ukusetyenziswa kwee-asidi ze-organic kuya kunciphisa i-pH kunye nokunyusa ityhefu ye-nitrite.
2. Ayinakusetyenziswa nge-sodium thiosulfate. Isodium thiosulfate iphendula ngeasidi ukuvelisa isalfure dioxide kunye nesalfure yento, eya kuthi ityhefise iintlobo zokuzalela.
3. Ayinakusetyenziswa nge-sodium humate. I-sodium humate ayinamandla e-alkaline, kwaye umphumo uya kuncitshiswa kakhulu xa zombini zisetyenziswa.
Izinto ezichaphazela ukusetyenziswa kweeacidi eziphilayo
1. Isikali: xa i-asidi enye ye-organic yongezwa ekondliweni kwezilwanyana zasemanzini, kodwa uxinizelelo lobunzima lwahlukile, umphumo wahlukile. Kwakukho iyantlukwano kwinqanaba lokufumana ubunzima, izinga lokukhula, inqanaba lokusetyenziswa kokutya kunye nokusebenza kweprotein; Ngaphakathi kuluhlu oluthile lokudityaniswa kwe-asidi ye-organic, kunye nokonyuka kokudityaniswa kwe-asidi ye-organic, ukukhula kweentlobo ezilinywayo kuya kukhuthazwa, kodwa xa kugqitha kuluhlu oluthile, ukuphakama okuphezulu kakhulu okanye okuphantsi kakhulu kwe-asidi ye-organic kuya kuthintela ukukhula kweentlobo ezilinywayo kunye ukunciphisa ukusetyenziswa kwesondlo, kwaye eyona ifanelekileyo yokongeza i-asidi yezilwanyana zasemanzini eyahlukileyo iya kwahluka.
2. Ukongeza ixesha: isiphumo sokongeza iiasidi eziphilayo kwizigaba zokukhula ezihlukeneyo zezilwanyana zasemanzini zahlukile. Iziphumo zibonise ukuba ukukhula kokukhuthaza ukusebenza bekuyeyona nto ibalaseleyo kwinqanaba elincinci, kwaye inqanaba lokufumana ubunzima lelona liphezulu, ukuya kuthi ga kwi-24.8%. Kwinqanaba labantu abadala, isiphumo sasicacile kwezinye iinkalo, ezinje ngoxinzelelo lwamajoni omzimba.
3. Ezinye izithako kwisondlo: ii-asidi ze-organic zinempembelelo yokuhlangana kunye nezinye izithako kwisondlo. Iiprotheyini kunye namanqatha aqulathwe kwisondlo anamandla amakhulu okugcina amandla, anokuphucula ubumuncu bomxhesho, anciphise amandla omxhesho wesondlo, aququzelele ukufunxeka kunye nokucolwa komzimba, oko ke kuchaphazele ukutya kunye nokwetyiswa.
4. Iimeko zangaphandle: ubushushu obufanelekileyo bamanzi, iyantlukwano kunye nolwakhiwo lwabemi bezinye iintlobo ze-phytoplankton kwimeko-bume yamanzi, ukutya okusemgangathweni okusemgangathweni, ukukhula kakuhle kunye nokungabikho kwezifo, kunye nokuxinana okufanelekileyo kokugcina impahla kubaluleke kakhulu kwisiphumo esihle se-asidi ye-organic .
5. Ikhompawundi esebenzayo ye-asidi ye-organic: ukongeza okusebenzayo kunokunciphisa inani lee-acid ezongeziweyo kunye nokufezekisa injongo ngcono.